आज धेरै मानिसहरू वित्तीय र मुद्रा बजार, स्टक आदानप्रदान बारेमा, साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजार मा रूपमा सुनेको छु। तथापि, धेरै केही मानिसहरू प्रश्न जवाफ दिन सक्नुहुन्छ: "विदेशी मुद्रा के हो?"।
जानिन्छ, मुद्रा बजारमा मुद्रा साटासाट गर्न सकिन्छ। अन वित्तीय बजार र स्टक आदानप्रदान स्टक, बन्धन, वायदा किन्न र बेच्न। तथापि, विदेशी मुद्रा के हो? यो मुद्रा खरीद र बेच्न जसमा एक अन्तर्राष्ट्रिय बजार छ। यो विनिमय को संस्थापक मिति 1976 छ। यो संसारमा, सबै राज्य तथाकथित "सुन मानक" (अर्थात्, एक निश्चित विनिमय दर) त्यागेर र अग्रगामी Jamaican प्रणाली, पूर्ण निःशुल्क विनिमय, साथै किन्न र बेच्न मुद्रा कल्पित जो सरेका छ। विदेशी मुद्रा विश्व अर्थव्यवस्था को काम को सामान्य कामकाज को लागि एक आवश्यकता भएको छ। विदेशी मुद्रा राज्य के हो? यो देशमा बीच राजधानी प्रवाह सुनिश्चित - यसको मौलिक र महत्त्वपूर्ण नियामक समारोह छ।
अर्कोतर्फ, छैन एकदम सही कुनै विशिष्ट व्यापार क्षेत्रमा छ जो विदेशी मुद्रा र मुद्रा विनिमय साथै ओटीसी अन्तर्राष्ट्रिय बजार, कल छ। बजार सहभागीहरू लेनदेन कार्यान्वयन र संलग्न हुन सक्नुहुन्छ , मुद्रा व्यापार वस्तुतः संसारमा कहीं पनि बेला।
आय को स्रोत को मामला मा विदेशी मुद्रा के छ र गर्न सक्छन् यो यति प्रयोग गर्न सकिन्छ? जवाफ अत्यन्तै सरल छ - हो, यो सम्भव छ। धेरै फरक मा कमाउन , विनिमय दर मा त्यो छ, speculative व्यापार सञ्चालन गर्छन्। यो मुद्रा दर मा बारम्बार उतार चढाव गर्न सम्भव धन्यवाद गरिएको थियो। उदाहरणका लागि, यूरो $ 1.4 लागि आज खरीद, र 1.5 (विनिमय दर धेरै चाँडै परिवर्तन गरिएको छ) को लागि यो बेच्न केही दिनमा, तपाईं 10 सेन्ट को यो सम्झौता पैसा बनाउन सक्छ। धेरै मान्छे को लागि, यो speculative गतिविधि लामो वास्तवमा, एक उच्च पर्याप्त आय उत्पादन गर्न सक्छन् कि एक पेशा भएको छ।
प्रश्न "के बजार छ विदेशी मुद्रा" थप स्पष्ट भएको छ। तर त्यहाँ कसरी?
यो गर्न, त्यहाँ पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजार मुद्रा मा व्यापार गर्न प्रदान जो विशेष कम्पनीहरु, कम्पनीहरु, कार्यालय, छन्।
यो दलाल र व्यवहार केन्द्र तथाकथित। उदाहरणका लागि, रूस मा, धेरै "Teletrade", "विदेशी मुद्रा क्लब", "Alpari" र धेरै अन्य जस्ता कम्पनीहरु को सुनेको छु।
के, उदाहरणका लागि "विदेशी मुद्रा क्लब" छ? यो यस्तो व्यवहार डेस्क, कसैले यो बजार मा व्यापार गर्न सक्छन् जो संग छ।
त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मा लाभ को एकदम धेरै छन् मुद्रा बजार विदेशी मुद्रा। उदाहरणका लागि, क्षमता एक लाभ बजार प्रवृत्ति निर्देशन बिना बनाउन। यो बजार मा व्यापार गर्न विनिमय दर मा वृद्धि र कमी दुवै हुन सक्छ। यो घडी (मुख्य किनमेल क्षेत्र सबै समय क्षेत्र मा स्थित) वरिपरि संचालित देखि, तपाईं कुनै पनि सुविधाजनक समयमा व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। व्यापार मात्र सप्ताहन्तमा मा सञ्चालन गरिएको छैन। यो बजार गर्न "उपकरण" पहुँच को सन्दर्भ मा विदेशी मुद्रा के हो? तपाईं वास्तवमा आवश्यक छैन: एक ल्यापटप, कम्प्युटर वा स्मार्टफोन आफ्नो खोल्ने विशेष कार्यक्रम र व्यक्तिगत डाटा दलाल, सेट गर्न जम्मा खाता व्यापार गर्न।
FrontStocks.com को समीक्षा। FrontStocks - फिर्ता
विदेशी मुद्रा मा "सार्दा औसत"
बाइनरी विकल्प प्राविधिक विश्लेषण को उपयोगी उपकरण
Ichimoku सूचक। साईट व्यापारीहरु र लगानीकर्ताले लागि "विदेशी मुद्रा"
मुद्रा विनिमय बेलारुस: विवरण र कार्य
छत कसरी पंक्तिबद्ध? छत पुटीन कसरी पंक्तिबद्ध?
विषय "राम्रो" विषयमा रचना-तर्क: कसरी आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सही छ
इगोर Petrenko - Filmography। अभिनेता इगोर Petrenko
अंग्रेजी मा अतिरिक्त-CURRICULAR गतिविधिहरु। अंग्रेजी मा विकास गतिविधिहरु
अस्पताल "र्याडोन" Khmelnik: तस्बिर र समीक्षा
"Phlebodia 600": analogues, निर्देशन, समीक्षा, वर्णन
पेस्ट GOI कहाँ किन्न, कसरी र किन प्रयोग गर्न
जीव मा taxonomy के हो? जीव: प्लान्ट systematics
महिला टी-शर्ट: एक अलमारी बनाउन